Billy Bishop Airport -ka Magaalada Toronto ayaa dib u bilaabay Adeeggii Ganacsiga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Billy Bishop Airport -ka Magaalada Toronto ayaa dib u bilaabay Adeeggii Ganacsiga
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dib -u -bilaabashada Billy Bishop Airport -ka Magaalada Toronto waa qayb muhiim ah oo ka mid ah istaraatijiyadda soo -kabashada ee Magaalada Toronto maadaama dib -u -bilaabiddeedu ay ka dhigan tahay soo noqoshada shaqooyinka, soo noqoshada ganacsiga iyo dalxiiska, iyo soo -noqoshada albaab qiimo leh oo loo maro mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan adduunka.
Billy Bishop Airport -ka Magaalada Toronto wuxuu soo dhoweynayaa adeeggii ganacsi ee dib loo soo celiyay
Diyaaradaha Porter iyo Air Canada ayaa ku soo laabtay Billy Bishop Airport -ka Magaalada Toronto.
Dib -u -bilaabista ganacsi waxay dhacdaa sannad -guuradii 82aad ee duulimaadkii ugu horreeyay ee madaarka.
Billy Bishop Airport-ka Magaalada Toronto ayaa u dabaaldegay dib ugu soo noqoshada cirka shalay iyadoo dib loo bilaabay adeegga duulimaadyada ganacsiga ee Porter Airlines iyo Air Canada kadib markii si ku-meel-gaar ah loo hakiyay howlihii masiibada COVID-19.
Billy Bishop Airport -ka Magaalada Toronto wuxuu u Dabaaldegayaa Ku -Noqoshada Adeegga Ganacsiga isagoo leh Canon Biyaha Gaarka ah
Si loo xuso munaasabadda, duullimaadkii ugu horreeyay ee xusuusta ee Ottawa oo ay ka soo qaybgaleen daneeyayaasha muhiimka ah iyo la -hawlgalayaasheeda ayaa “loo diyaariyey inay duusho” iyada oo salaan sharaf gaar ah oo biyo ah ay sameeyeen kooxda Badbaadinta iyo Dab -damiska Madaarka Billy Bishop Airport.
Billy Bishop AirportShaqaalaha, daneeyayaasha iyo la -hawlgalayaasha dawladda ayaa calaamadeeyay maalinta waxayna aqoonsadeen gabagabada xilli adag oo loogu talagalay warshadaha duulista iyada oo soo dhoweyneysa rakaabka oo ku soo laabanaya meheradda isku -xiridda iyo taageeridda dhaqaalaha Toronto. Dib -u -bilaabista ganacsi si lama filaan ah waxay u dhacdaa 82nd Sanadguuradii duulimaadkii ugu horreeyay ee madaarka jasiiradda 1939 -kii.
Geoffrey Wilson, Maamulaha PortsToronto, milkiilaha iyo hawl wadeenka Madaarka Billy Bishop, waxaa ku weheliyay Cibaadadiisa John Tory, Duqa Toronto, iyo Michael Deluce, Madaxweynaha iyo Maamulaha Duuliyaha Diyaaradda isagoo bixinaya hadalo uu ugu dabbaaldegayo munaasabadda. Rakaabkii iyo shaqaalihii waxaa lagu daweeyey hadiyado iyo abaalmarino, duulimaadkii ugu horreeyay ee xusuusta ee Ottawa oo ay ka soo qaybgaleen daneeyayaasha muhiimka ah iyo la -hawlgalayaasheeda ayaa “loo diyaariyey inay duusho” iyada oo salaan sharaf gaar ah oo biyo ah ay sameeyeen kooxda Gurmadka iyo Dab -damiska Garoonka.
Tallaal cusub oo COVID-19 ah oo la sameynayo: Waxyeello ma leh!